Blasius da Gomes: Tsy Maty Satria Niala An’ireo Toerana Nampidi-doza
TANTARANY Anti-panahy be fitiavana izy, ary nikarakara ny andian’ondry rehefa nisy ady ara-pivavahana tany Ambon, any amin’ny Nosy Maluku.
NITOMBO ny disadisa teo amin’ny Kristianina sy ny Silamo, ka raikitra ny ady ny 19 Janoary 1999. Teo amin’ny telo kilaometatra avy teo amin’ny tranoko no nitrangan’izany. Nahatsiravina ilay izy. *
Napetrako tany amin’ny toerana azo antoka aloha ny fianakaviako, dia nantsoiko an-telefaonina ny mpitory hafa mba hahalalako hoe manao ahoana izy ireo. Nampirisihiko izy ireo mba ho tony sy hanalavitra ny faritra mampidi-doza. Nitsidika ny andian’ondry ny anti-panahy taorian’izay mba hampahery azy ireo. Nilazanay koa izy ireo hoe tokony ho vitsivitsy no miara-mivory.
Nasain’ny biraon’ny sampana nafindra izay mpitory nipetraka tany amin’ny faritra nampidi-doza. Nampitainay tamin’ny fianakaviana maro io toromarika io. Tsy nety nifindra anefa ny rahalahy iray ka matin’ny vahoaka romotra. Nieren-doza kosa izay rehetra nanaraka an’ilay toromarika.
^ feh. 1 Nitatra eran’ny faritr’i Maluku io ady io ary naharitra roa taona mahery. Olona an’aliny no voatery nitsoa-ponenana.